SHAX isku dhaf ah oo laga sameeyay Kooxaha Man City vs Arsenal ka hor kulankooda habeen dambe ee Premier League… (Yaa xiddigaha ugu badan ku leh?) – Gool FM
(Manchester) 10 Mar 2020. Kooxaha Arsenal iyo Manchester City ayaa habeen dambe ku ballansan garoonka Etihad Stadium , ciyaar qeyb ka ah horyaalka Premier League ee dalka England.
Mikel Arteta ayaa bandhig cajiib ah sanadkan ku jira, isago aan laga adkaan sanadkan 2020-ka, halka City ayaa guuldarro xanuun badan kala soo kulantay Man United kulankii ugu dambeeyay ee ay horyaalka ka dheesho.
Kulan ayaa baaqi u ahaa labadan kooxood, Arsenal oo ku jirta bandhig heer sare ah ayaa waxa ay booqonaysa Etihad Stadium, halka Man City oo jahwareer kala soo kulantay Man United ay doonayso inay wadada guusha dib ugu soo laabato.
Shabakadda Sports Mole ayaa soo saaray shaxda isku dhafka ah ee labada kooxood ka hor kulankooda Arbacada, kooxda Arsenal ayaa kaliya 4 xiddig ku leh shaxdan, halka ay Wiilasha Man City ay xiddigaha ugu badan ku leedahay iyaga oo ku yeelatay 7 xiddig.
Haddaba halkaan hoose ka eeg shaxda isku dhafka ah ee ay Kooxaha Man City iyo Arsenal ka sameysay Majaladda lagu magacaabo Sports Mole:-